*लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँ* (भाग एक) – Sikkim Journal
जनता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहान्छन् तर तानाशाहहरू लोकतन्त्रलाई लुईतामे र कमजोर बनाउन चाहान्छन्। पशु प्राणीहरू प्रकृतिको नियम अन्तर्गत बाँची रहन्छन्। मानव जाति भने प्रकृतिको नियममा मात्र बाँधिएर बसेनन् तर ति प्राकृतिक नियमलाई बुझेर मानव जातिको कल्याणकालागी प्रयोग गरे। प्रकृतिलाई बुझ्दै संङ्गठित भए अनि संङ्गठित हुने क्रममा विभिन्न समाज व्यवस्थाहरू स्थापना गर्दै गए। यसरी दास व्यवस्था, सामन्तवाद, पुँजीवाद, सामाजवाद, साम्यवाद आदि व्यवस्थाहरू मानव जातिले बनाए।
कुनै समयमा मानव समाजमा मालिक थिएनन्, राजा थिएनन्, दास थिएनन्, रैति थिएनन्, पुँजीपति थिएनन्, सामन्तहरू थिएनन्, शोषण थिएन, लोभ थिएन, चोरि थिएन, निजी सम्पति थिएन आदी ईत्यादी। समाजको विकास क्रममा शाषक जन्मियो, शोषणको उदय भयो र समाज वर्ग विभाजित पनि बन्यो।
लोकतन्त्र मानव समाजको निश्चित विकास क्रममा उदाएको समाजलाई संचालन गर्ने विधि र विचारहरू मद्दे एक हो। समाजलाई संचालन गर्ने अधिकार जनताका हातमा रहने विचारलाई लोकतन्त्रले अघि सार्यो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतन्त्र जनपक्षीय हुने भयो। लोकतन्त्रको विकासले शाषन सत्ताको अधिकार एउटा निश्चित मान्छे जस्तै राजा र मालीकको हातमा नरहेर जनताको हातमा रहने भयो।
लोकतन्त्र के हो? कसरी विकास भयो? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन्? कसरी यसलाई सुधार्न सकिन्छ? के लोकतन्त्रलाई अझ विकास गर्न सकिन्छ? लोकतन्त्रको केही विकल्प छ? के आजका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू श्रमीक वर्गका पक्षमा छ कि छैन्? आदी प्रश्नहरू अति नै महत्वपुर्ण छन्। यसलाई लामो चर्चाको आवश्यकता हुन्छ। यस लेखमा आजको सिक्किमे समाजमा लोकतन्त्रलाई कसरी शक्तिशाली बनाउँन सकिन्छ? के कारण कमजोर भईरहेको छ? जनताले के कस्ता भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ आदी विषयमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
लोकतन्त्रमा शक्ति विकेन्द्रीकरण (Power decentralization) गर्न अनिवार्य हुन्छ। अधिनायकवादि सत्तामा अधिनायकको हातमा शक्ति केन्द्रित भएको हुन्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति जनताको हातमा हुनुपर्छ, नेताको हातमा होईन। सिक्किमा सत्तारूढ पार्टीमा होस या त विपक्षी पार्टीमा लगभग एकजना मान्छेको हातमा शक्ति केन्द्रित भएको हुन्छ। विगतको सरकारमा पनि चाहे विधायक (MLA) होस या पञ्चायत होस जनमानसलाई सम्बोधन गर्दा मुख्यमन्त्रीको दिशा निर्देश भन्ने, मुख्यमन्त्रीको सपना अनुरुप भन्ने आदी चलन थियो आज पनि उस्तै अवस्था छ, कुनै पनि मन्त्री, विधायक या नेता होस सबैजना मुख्यमन्त्रीको आदेश, सपना, निर्देशन्, विचार आदि लगाई रहेका हुन्छन्। यसले के स्पष्ट बताउँछ भने विचार समुहले निर्माण नगरेर एक व्यक्तिले गर्दै गरेका छन् भन्ने स्थापित हुन्छ।
लेखक- रुपेन कार्की, सदाम दक्षिण सिक्किम